စနစ်ကျပြီး အလွယ်တကူ ငွေစုဆောင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်း - MM Daily Life
စနစ်ကျပြီး အလွယ်တကူ ငွေစုဆောင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်း
May 14, 2022 by MM Daily Life
ဘာလို့ ငွေစုဆောင်းကြတာလဲ? ယေဘုယျအနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် အနာဂတ် ငွေကြေးအခြေအနေကို မခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ရှည်လများ စုဆောင်းထားတဲ့ငွေတွေဟာ သင့်ရဲ့ ငွေကြေးပိုင်ဆိုင်မှုကို ခိုင်မာလုံခြုံမှုရှိစေပြီး အရေးပေါ် ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲတွေကနေ လွတ်မြောက်စေနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ ဒီတော့ နောင်ရေးအတွက် စနစ်တကျ ကြိုတင် ငွေစုဆောင်းဖို့ လိုပြီပေါ့။ဒီဆောင်းပါးထဲမှာတော့ စာဖတ်ပရိတ်တွေအတွက်အလွယ်တကူငွေစုဆောင်းနိုင်မယ့် နည်းလေးတွေကို ပြောပြပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) အသုံးစရိတ်တွေကို မှတ်သားပါ
ငွေ စစုဖို့အတွက် အရင်ဦးဆုံး လိုအပ်တာက ကိုယ် ငွေ ဘယ်လောက် ပမာဏ သုံးဖြစ်နေလဲဆိုတာကို သိရှိဖို့ပါ။
ပြီးတော့ ကိုယ်ဘယ်နေရာမှာ ငွေ သုံးလိုက်တယ်ဆိုတာကို အမြဲမှတ်သားထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ – ဘတ်စ်ကားခ၊ ကော်ဖီဖိုး၊ ဆံပင်ညှပ်ခက အစရေးမှတ်ထားဖို့ပါ။ အသုံးစရိတ်တွေကို ရေးမှတ်တဲ့အခါ စားသောက်စရိတ်၊ အိမ်စရိတ်၊ သာရေးနာရေး စတဲ့ အုပ်စုလေးတွေခွဲပြီး မှတ်သားထားဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
(၂) ငွေစုမယ့် ပမာဏ သတ်မှတ်ပါ
တစ်လစာ ဘာတွေသုံးရမလဲဆိုတာကို သိပြီးပြီဆိုရင်တော့ အသုံးစရိတ်အတွက် ဘက်ဂျက်ပလန်ကို ရေးဆွဲပြီး စုငွေပမာဏကို သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးစရိတ်စုစုပေါင်းကို တွက်ပြီးတဲ့အခါ ဝင်ငွေထဲက ဘယ်လောက်ပမာဏကို စုရမယ်၊ ဘယ်လောက်ပမာဏကို သုံးရမယ် ဆိုတာ ခွဲခြားနိုင်ပါပြီ။ဒီလို ကြိုတင် သတ်မှတ်ထားတော့ ထွက်ငွေတွေ များသွားတာ၊ အသုံးစရိတ် ဘက်ဂျက်ကို ကျော်သုံးမိတာမျိုးတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) မလိုအပ်ဘဲ ငွေသုံးတာကို လျှော့ပါ။
ငွေစုဖို့ ပမာဏသတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုတော့ အဲဒီပမာဏအတိုင်း စုဆောင်းနိုင်အောင်လို့ မလိုအပ်ပဲ ငွေအပိုသုံးမိတာတွေကို လျှော့ဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ ရုံးနောက်ကျလို့ တက်စီ စီးရတဲ့အခါမျိုး၊ တစ်ပတ်ကို တစ်ခါလောက် အပြင်ထွက်မုန့်စားနေတာမျိုးတွေပေါ့။ ဒီလိုမျိုးတွေကြောင့် သင့်ကို အပိုငွေတွေကုန်ကျစေပြီး အသုံးစရိတ်တွေ တိုးလာတဲ့အခါ ဘက်ဂျက်ကို ကျော်လွန် သုံးစွဲမိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့် အသုံးစရိတ်ဘက်ဂျက်အတွင်းကပဲသုံးစွဲပါ။မလိုအပ်တဲ့ ငွေပိုတွေ မသုံးမိပါစေနဲ့။
ပိုကျဆံစုဖို့ အကောငျးဆုံးနဲ့ အလှယျကူဆုံးနညျးလမျးကတော့ ပနျးတိုငျ သခြောသတျမှတျပွီး စုဆောငျးတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ဥပမာ လကျထပျဖို့၊ အိမျဝယျဖို့၊ ကားဝယျဖို့၊ ခရီးထှကျဖို့ စသဖွင့ျပေါ့။ကိုယျလိုခငြျတဲ့ ရညျမှနျးခကြျထားပွီး ငှစေုတဲ့အခါ မှနျမှနျ စုဆောငျးမှာ ဖွဈသလို မွနျမွနျလညျး ကိုယျမှနျးထားတဲ့ ပမာဏပွည့ျမွောကျနိုငျလို့ပါ။ နှဈတိုလား? နှဈရှညျလား? ခှဲခွားပွီး စုဆောငျးနိုငျသလို ကိုယျ သတျမှတျထားတဲ့ ငှပေမာဏရောကျတဲ့အထိလငျ်ညး ရညျမှနျးပွီး စုဆောငျးနိုငျပါတယျ။
အပေါ်က အချက် (၄)ချက်ကို ဖတ်ပြီးတော့ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ ငွေစုဆောင်းဖို့ အတွက် အကြံတစ်ချို့ရသွားမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
တကယ်တမ်းပြောရရင် ငွေစုဖို့ က မခက်ပါဘူး။ နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ သေချာ စတင်ပြီး စုဆောင်းဖို့ပဲ လိုတာပါ။ နောက်တစ်ခု သတိထားပြီး လိုက်နာရမှာက အပိုငွေသုံးဖို့ ဖြစ်လာတဲ့အခါ လိုချင်တာနဲ့ လိုအပ်တာကို သေချာခွဲခြားဆုံးဖြတ်ပြီးမှ ငွေကို သုံးစွဲဖို့ပါ။ တစ်နေ့တစ်လံသွားရင်တောင် ပုဂံရောက်နိုင်သေးတာပါပဲ။ ကိုယ်က ငွေကို နည်းနည်းချင်း ပုံမှန် စုဆောင်းသွားမယ်ဆိုရင် တစ်ချိန်မှာ ကိုယ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏအထိ စုဆောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို႔ ေငြစုေဆာင္းၾကတာလဲ? ေယဘုယ်အေနနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အနာဂတ္ ေငြေၾကးအေျခအေနကို မခန႔္မွန္းႏိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား စုေဆာင္းထားတဲ့ေငြေတြဟာ သင့္ရဲ႕ ေငြေၾကးပိုင္ဆိုင္မႈကို ခိုင္မာလုံၿခဳံမႈရွိေစၿပီး အေရးေပၚ ေငြေရးေၾကးေရး အခက္အခဲေတြကေန လြတ္ေျမာက္ေစႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ကဲ ဒီေတာ့ ေနာင္ေရးအတြက္ စနစ္တက် ႀကိဳတင္ ေငြစုေဆာင္းဖို႔ လိုၿပီေပါ့။ဒီေဆာင္းပါးထဲမွာေတာ့ စာဖတ္ပရိတ္ေတြအတြက္အလြယ္တကူေငြစုေဆာင္းႏိုင္မယ့္ နည္းေလးေတြကို ေျပာျပေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၁) အသုံးစရိတ္ေတြကို မွတ္သားပါ
ေငြ စစုဖို႔အတြက္ အရင္ဦးဆုံး လိုအပ္တာက ကိုယ္ ေငြ ဘယ္ေလာက္ ပမာဏ သုံးျဖစ္ေနလဲဆိုတာကို သိရွိဖို႔ပါ။
ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ဘယ္ေနရာမွာ ေငြ သုံးလိုက္တယ္ဆိုတာကို အၿမဲမွတ္သားထားဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာ – ဘတ္စ္ကားခ၊ ေကာ္ဖီဖိုး၊ ဆံပင္ညႇပ္ခက အစေရးမွတ္ထားဖို႔ပါ။ အသုံးစရိတ္ေတြကို ေရးမွတ္တဲ့အခါ စားေသာက္စရိတ္၊ အိမ္စရိတ္၊ သာေရးနာေရး စတဲ့ အုပ္စုေလးေတြခြဲၿပီး မွတ္သားထားဖို႔လည္း မေမ့ပါနဲ႔။
(၂) ေငြစုမယ့္ ပမာဏ သတ္မွတ္ပါ
တစ္လစာ ဘာေတြသုံးရမလဲဆိုတာကို သိၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ အသုံးစရိတ္အတြက္ ဘက္ဂ်က္ပလန္ကို ေရးဆြဲၿပီး စုေငြပမာဏကို သတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အသုံးစရိတ္စုစုေပါင္းကို တြက္ၿပီးတဲ့အခါ ဝင္ေငြထဲက ဘယ္ေလာက္ပမာဏကို စုရမယ္၊ ဘယ္ေလာက္ပမာဏကို သုံးရမယ္ ဆိုတာ ခြဲျခားႏိုင္ပါၿပီ။ဒီလို ႀကိဳတင္ သတ္မွတ္ထားေတာ့ ထြက္ေငြေတြ မ်ားသြားတာ၊ အသုံးစရိတ္ ဘက္ဂ်က္ကို ေက်ာ္သုံးမိတာမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
(၃) မလိုအပ္ဘဲ ေငြသုံးတာကို ေလွ်ာ့ပါ။
ေငြစုဖို႔ ပမာဏသတ္မွတ္ၿပီးၿပီဆိုေတာ့ အဲဒီပမာဏအတိုင္း စုေဆာင္းႏိုင္ေအာင္လို႔ မလိုအပ္ပဲ ေငြအပိုသုံးမိတာေတြကို ေလွ်ာ့ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ ႐ုံးေနာက္က်လို႔ တက္စီ စီးရတဲ့အခါမ်ိဳး၊ တစ္ပတ္ကို တစ္ခါေလာက္ အျပင္ထြက္မုန႔္စားေနတာမ်ိဳးေတြေပါ့။ ဒီလိုမ်ိဳးေတြေၾကာင့္ သင့္ကို အပိုေငြေတြကုန္က်ေစၿပီး အသုံးစရိတ္ေတြ တိုးလာတဲ့အခါ ဘက္ဂ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ သုံးစြဲမိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ အသုံးစရိတ္ဘက္ဂ်က္အတြင္းကပဲသုံးစြဲပါ။မလိုအပ္တဲ့ ေငြပိုေတြ မသုံးမိပါေစနဲ႔။
ပိုက်ဆံစုဖို႔ အေကာင်းဆုံးနဲ႔ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကေတာ့ ပန်းတိုင် သေျခာသတ်မွတ်ပြီး စုေဆာင်းတာပဲ ဖြဈပါတယ်။ဥပမာ လက်ထပ်ဖို႔၊ အိမ်ဝယ်ဖို႔၊ ကားဝယ်ဖို႔၊ ခရီးထွက်ဖို႔ စသဖြင့်ေပါ့။ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရည်မွန်းခၾက်ထားပြီး ငွေစုတဲ့အခါ မွန်မွန် စုေဆာင်းမွာ ဖြဈသလို မြန်မြန်လည်း ကိုယ်မွန်းထားတဲ့ ပမာဏပြည့်ေမြာက်ႏိုင်လို႔ပါ။ ႏွဈတိုလား? ႏွဈရွည်လား? ခွဲခြားပြီး စုေဆာင်းႏိုင်သလို ကိုယ် သတ်မွတ်ထားတဲ့ ငွေပမာဏေရာက်တဲ့အထိလင်္ညး ရည်မွန်းပြီး စုေဆာင်းႏိုင်ပါတယ်။
အေပၚက အခ်က္ (၄)ခ်က္ကို ဖတ္ၿပီးေတာ့ စာဖတ္သူေတြအေနနဲ႔ ေငြစုေဆာင္းဖို႔ အတြက္ အႀကံတစ္ခ်ိဳ႕ရသြားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ေငြစုဖို႔ က မခက္ပါဘူး။ နည္းလမ္းမွန္မွန္နဲ႔ ေသခ်ာ စတင္ၿပီး စုေဆာင္းဖို႔ပဲ လိုတာပါ။ ေနာက္တစ္ခု သတိထားၿပီး လိုက္နာရမွာက အပိုေငြသုံးဖို႔ ျဖစ္လာတဲ့အခါ လိုခ်င္တာနဲ႔ လိုအပ္တာကို ေသခ်ာခြဲျခားဆုံးျဖတ္ၿပီးမွ ေငြကို သုံးစြဲဖို႔ပါ။ တစ္ေန႔တစ္လံသြားရင္ေတာင္ ပုဂံေရာက္ႏိုင္ေသးတာပါပဲ။ ကိုယ္က ေငြကို နည္းနည္းခ်င္း ပုံမွန္ စုေဆာင္းသြားမယ္ဆိုရင္ တစ္ခ်ိန္မွာ ကိုယ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏအထိ စုေဆာင္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
” သူတစ်ပါး အိမ်ထောင်ကို ဖြိုခွဲခဲ့တဲ့သူ (သို့) မယားငယ်တွေ ခံစားရမယ့် ပူလောင်ခြင်းဝဋ် (၅) မျိုး “
စိတ်ထွက်ပေါက်တွေပိတ်နေတဲ့အခါ မနက်ဖန်ဆိုတာကို ခဏမေ့လိုက်ပါ